माया गर्नेहरुका लागी टेक बहादुरले ल्याए ‘तिम्रै यादमा बाँचिराको छु’ (म्युजीक भिडियो) | Artist Khabar
माया गर्नेहरुका लागी टेक बहादुरले ल्याए ‘तिम्रै यादमा बाँचिराको छु’ (म्युजीक भिडियो)	पुस, काठमाडौं । नेपाली लोकगीतको बजार ठुलो छ । दिनहुँजसो लोक गीतहरु बजारमा आईरहेका पनि हुन्छन् । यसैक्रममा गायक टेक ब. सुनारको स्वरमा रहेको ‘तिम्रै यादमा बाँचिराको छु’ बोलको लोक गीत सार्वजनिक गरीएको छ ।
अम्मर सिंहले लेखेका शब्दहरुमा मायाका कुराहरु पाइन्छन्् । साथै गीतमा संगीतपनि अम्मरले नै भरेका छन् । परेली फिल्मस्को उत्पादन तथा बितरणमा निर्माण भएको यस गीतको भिडियोलाई मिलन कार्कीले निर्देशन गरेका हुन् ।
सागर गौतमले छायांकन गरेको यस भिडियोमा पोखरा तथा काठमाडौंका रमणियस्थानहरु देखाइएको छ । भिडियोमा नारायण ढकाल, मनिषा श्रेष्ठ र उज्जवल बि.कले अभिनय गरेका छन् भने मोडल नारायण ढकालको जन्मदिन पारेर यस भिडियो सार्वजनिक गरीएको हो ।
दाङमा जन्मिएका नव गायक टेक ब. सुनारको यो पहिलो गीत हो । सानै देखी गीत संगीतमा रुची राख्दै आएको र अब लोकगीतको क्षेत्रमा सक्रिए हुने उनले बताएका छन् ।